Kabary fisaorana sy famaranan’ny mpamoaka - Informations et Actualités sur Madagascar
Culture Education Kabary fisaorana sy famaranan’ny mpamoaka
by Alpha world on 01 h 03 in Culture, Education
Faran’ny vilo ny omby
Faran’ny omby ny hena
Misy farany avokoa ny zava-drehetra, na dia tiana aza ny hiarahan-tsika mikorana eto.
Eto ampamaranana, dia misaotra indrindra anareo izahay, fa notafianareo haja, notoloranareo voninahitra, amin’ny fanotronana anay, tsy mba nankamamy asa aman-draharaha ianareo, tsy voasakan’ny adidy aman-andraikitra hafa, tsy nandala ny vola aman-karena fa tonga tamim-pitiavana tokoa.
Raha mikalo tsy amim-baliha hono, tsy manga raha mandihy tsy amin’amponga maivana, raha mamindro lavitry ny afo mangatsiaka”.
Eny maivana tsy manga, ary mangatsiaka izao lanonana izao raha tsy natrehinareo. Koa misaotra indrindra tompoko, tsy atao sitraka andro hanaovana tahaka ny tongotr’omby mihosy anie izao, fa sitraka enti-matory, telina enti-mifoha.
Farany, ny amin’ny sakafo izay nomanina teo, raha sanatria nisy izay tsy lavorary, dia aza omen-tsiny fa tsy satrin’ny mpandihy ny mipetraka sy misonenika an-toerana, fa ny lamba ho enti-mitsangana no tsy misy.
Ka izay re no vita tompoko, izay no masaka, nahandro takatra, izay no takatry, ny ananana. Toy ilay ondrilahy mifatotra am-patorana, ka izay takatrin’ny tady no anaranam-po.
Tsitsina mitondra vonintenona ihany, ka izay zakan’ny vava no entina. Koa dia mahasoava, tongava nofo, manjaria tolana hahasoa sy hahatsara.
Mankatelina indrindra tompokolahy makasitra indrindra tompokovavy!
By Alpha world at 01 h 03